Izindaba ze-Hyperbaric - I-Tekna Hyperbaric ikhuluma ulimi lwakho!
I-Hyperbaric News - I-Tekna Hyperbaric ikhuluma ulimi lwakho!
Ikhaya/Posts/Izithombe zebhulogi/I-Hyperbaric News - I-Tekna Hyperbaric ikhuluma ulimi lwakho!
I-Tekna Ikhuluma Ulimi Lwakho!
I-Tekna I-Hyperbaric Chamber Iwebhusayithi iye yahunyushwa ngokuzikhandla ngezilimi ezahlukene ze-105 ngasinye nesinye isizinda esithile esithile selimi. Lawa mawebhusayithi amasha woLwimi lwaseNative avumela i-Tekna Ukuthengisa oku-inthanethi noMnyango Wokukhangisa ukuxhumana namakhasimende ayigugu ngolimi lwabo emhlabeni wonke.
Amawebhusayithi amaningi asebenzisa i-Google Translate noma abanye abahumushi bamashini abangalimaza ukwethembeka kwabo namakhasimende abo ngenxa yeziphambeko zokuhumusha kanye nezindaba zohlelo lolimi abahumushi abazenzekelayo.
Sithemba ukuthi ukukhetha kwethu ukusebenzisa i-Professional Translation kuzokwenza ukuthi ukuxhumana kwakho ne-Tekna kube lula futhi kujabulise.
By teknamfg|2018-01-29T12:54:26+00:00I-December 16th, i-2017|Izithombe zebhulogi|Amazwana Off I-Hyperbaric News - I-Tekna Hyperbaric ikhuluma ulimi lwakho!